Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda Adduunka | Somalia News
Ciidamada Dowlada ee magaalada Beledweyne oo kala eryay bannaanbax looga horjeedo Hirshabeelle
Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Gobolka Hiiraan ayaa hor istaagay oo kala eryay bannaanbax maatna ka dhacayey Magaalada Beledweyne, kaasoo looga horjeeday dhismaha Maamulka Hirshabeelle. Dad lasoo abaabulay ayaa bilaabay isu soo bax, iyadoo ay so dhex galeen ciidamada ayna kla eryeen, waxaana muddo kooban la xiray saxafyiintii tebineysay bannaanbaxa, waxaan halkaas ku joogsaday bannaanbaxaasi. Ad Taliyaha Saldhiga Booliska magaalada Beledweyne L/Xiddigle Maxamed Maxamuud Qoorsheel ayaa sheegay inaan Magaalada Baladweyne lagu qaban karin Banaabax aan laamaha Amaanka ka war qabin, fasaxna loo heysan. Wuxuu sheegay taliyaha inay tallaabo ka qaadi doonan dadka abaabulaya qaska ee bannaanbaxyada ka wada magaalada iyadoo aan laga war qabin. Bannaanbaxa magaalada Beledweyne ayaa salk ku haya diidmada beel degta Gobolka Hiiraan ay uga hor timid qaabka loo dhisayo maamulka labaad ee Hirshabelle oo qabanqaabadiisu ka socota magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle. Warar Xul ah
Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda Adduunka
Maanta oo taariikhdu tahay 21 Siteembar ayaa ah maalinta Qaramada Midoobey u asteysey in ay noqoto maalinta nabadda ee caalamka.
Sanadkii 1981 ayaa shirkii loo dhamaa ee Qaramada Midoobey isku raaceen 21 Siteembar in ay noqoto maalinta nabadda, waxaa maanta oo kale meelo kala geedisan oo dunada ah lagu qabtaa shirar looga hadlaayo muhimadda ay nabaddu leedahay.
Xuska maalinta nabadda ee sanadkan 2020 ayaa halkudhig looga dhigay: Shaping Peace Together
Xuska maalinta nabadda Adduunka ayaa inta badan ku soo beegma xiliga loo fadhiyo shirka loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey, waxaana uu sanadkan ku soo beegmayaa iyada oo caalamka oo dhan uu wax ka beddalay xanuunka COVID-19.
Qaar kamid ah magaalooyinka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay maanta ka dhacaan shirar looga hadlaayo muhimadda nabaddu leedahay laguna xusaayo maalinta nabadda adduunka.
The post Maalinta Caalamiga ah ee Nabadda Adduunka appeared first on Horseed Media • Somali News.
Previous articleDonald Trump in a hurry to find a successor to the Supreme Court
Next article‘Succession’ and ‘Watchmen’ Series Dominate Emmy Awards